Ampidiro ao anaty bilaoginao WordPress ny bokotra retweet | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 21, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Twitter dia mitombo ho loharanom-pahalalana mahafinaritra amin'ny fifamoivoizana mifandraika amin'ny tranonkala sy bilaogy. Manentana ny mpanjifako rehetra aho hampiasa RSS ho an'ny automatisation Twitter amin'ny alàlan'ny fitaovana toy izany Hootsuite or Twitterfeed. Mamporisika anao koa aho hampifangaro ny fahafahan'ny mpitsidika mandefa bitsika mivantana avy amin'ny bilaoginao.
Nanandrana serivisy vitsivitsy aho, anisan'izany ny plugins WordPress vitsivitsy… ary nanapa-kevitra ny hampiditra ny bokotra Retweet an'ny Twitter aho tamin'ny farany. Tiako ny fifandraisana atolotry ny fampidirana. Na dia mitaky ny tsindrio anao aza ny fampidirana hafa dia alefaso avy amin'ny Twitter, ity bokotra ity dia ahafahanao miditra indray mandeha ary mila tsindrio fotsiny ny bokotra Retweet dia vita ianao. Izay mora rehetra dia hiteraka fampiasana bebe kokoa raha momba ny tranonkala!
Ny sasany amin'ireo plugin dia tsy mamela anao hitady tsara ny bokotra. Tiako hifanaraka amin'ilay olona mamaky ny lohatenin'ny paositra ny ahy. Raha mihoatra ny tsipika iray ny lohatenin'ny lahatsoratro… dia hidina ny bokotra satria azoko apetraka amin'ny votoatin'ny lahatsoratro fotsiny izany. Vokatr'izany dia nampifandraisiko tanana tamin'ny alàlan'ny fametrahana an'ity kaody manaraka ity eo ambonin'ny lohateny Post amin'ny pejin-tranonkalako, pejy arisiva sy ny sokajy ary ny pejy fandefasana tokana ao anatin'ny lohahevitro:
Bitsika> / a>
Sep 22, 2009 amin'ny 8: 20 AM
noho ny fahalianana fotsiny Doug dia misy fomba fisafidianana ny haben'ny bokotra - ilay lehibe na ilay kely kokoa
Sep 23, 2009 amin'ny 3: 46 AM
Salama Steven! Azonao antoka fa azonao atao - azonao atao ny manampy ny dikanteny feno amin'ny fanampiana: tweetmeme_style = 'compact'; amin'ny script.
5 Okt 2009 amin'ny 12:51 PM
Misaotra Douglas - tena nanampy izany. Nampiasa ny plugin WordPress aho fa sendra io rohy io ary nanapa-kevitra ny handeha amin'ny fomba "hands on" bebe kokoa!
Oct 6, 2009 amin'ny 1: 43 AM
Salama Liana amin'ny fanaovana an'io koa aho, nefa toa tsy mety ny mametraka azy tsara. Rehefa apetrako eo ambonin'ny kaody lohatenin'ny lahatsoratra amin'ny pejy tokana io fa tsy mipetraka eo ankavanan'ny lohateny sy mifanaraka aminy dia manosika ilay lohateny. Azonao hazavaina ve izay tsy mety ataoko. Misaotra
Jun 18, 2011 ao amin'ny 11: 04 PM
Nohavaozina izy ity mba hipetrahana ao anaty pejy misy ny bokotra Twitter marobe toa ny pejy Index sy ny Sokajy na Pejy Arisiva ny lahatsoratra sy rohy mifanaraka amin'izany. Tsy mila manampy data-url sy data-data amin'ny pejy famoahana tokana ianao - Twitter dia hisintona ny fampahalalana avy amin'ny lohatenin'ny pejy sy ny URL canonical.